OTDR Vagadziri | China OTDR Fekitori & Vatengesi
Iyo Mini-Pro OTDR inoshanda kune FTTx uye yekuwana network kuvaka uye kugadzirisa, kuyedza fiber breakpoint, kureba, kurasikirwa uye yekuisa mwenje otomatiki kuona, otomatiki bvunzo nekiyi imwe.
Iyo tester inoenderana ne3.5 padiki yakajeka LCD skrini, nyowani yepurasitiki gadzira dhizaini, yekuvhundutsa-chiratidzo uye kudonhedza-humbowo.
Iye muyedzo anosanganisawo masere mabasa neakanyanya kubatanidzwa OTDR, Mamepu echiitiko, Chigadziko Chiedza sosi, Optical simba mita, Yekutarisa mhosva locator, tambo kuteedzana kuverenga kuverenga, tambo kureba kuyera uye magetsi mabasa. Inogona kukurumidza kuona breakpoint, universal connector, mazana matanhatu ekuchengetedza, TF kadhi, USB yekuchengetedza dhata uye yakavakirwa-mukati 4000mAh lithiamu bhatiri, USB kuchaja. Icho chisarudzo chakanaka chenguva refu yebasa remumunda.
Iyo NK5600 Optical Nguva Domain Reflectometer inoshanda-yepamusoro, yakawanda-inoshanda bvunzo yekuyera yakagadzirirwa iyo FTTx network. Chigadzirwa chine resolution yepamusoro ye0.05m uye ine diki nzvimbo yekuyedza ye0.8m.
Ichi chigadzirwa chinosanganisa iyo OTDR / mwenje sosi, magetsi emagetsi, uye mabasa eVFL mumuviri mumwe. Iyo inoshandisa kubata uye kiyi mbiri yekushandisa modes. Chigadzirwa chine akapfuma ekunze interface uye inogona kudzorwa kure kuburikidza neEthernet interface, kana kuburikidza nemaviri akasiyana USB interface, yekunze U disk, purinda uye PC data kutaurirana.
Sfp C ++, External Modulation Transmitter, Huawei Qsfp +, Xfp Transceiver, Optical Fiber Module, Huawei Olt Mutengo,